Vanamwari vemarudzi vanoenzaniswa naMwari mupenyu (1-16)
Kuparadzwa uye kutapwa zvava pedyo (17, 18)
Jeremiya anoshungurudzika (19-22)
Muprofita wacho anonyengetera (23-25)
Munhu haagoni kururamisa nhanho dzake (23)
10 Inzwai shoko rataurwa naJehovha pamusoro penyu, haiwa imi imba yaIsraeri. 2 Zvanzi naJehovha: “Musadzidza nzira yemamwe marudzi,+Uye musatyiswa nezviratidzo zvekudenga,Nekuti mamwe marudzi anotyiswa nazvo.+ 3 Nekuti tsika dzemarudzi acho hadzisi chinhu.* Unongova muti wesango unotemwa,Wogadzirwa nemaoko emhizha ichishandisa mudziyo wayo.+ 4 Vanoushongedza nesirivha negoridhe,+Vouroverera nezvipikiri nesando kuti urege kudonha.+ 5 Haigoni kutaura kungofanana nedukununu rekutyisidzira shiri mumunda wemagaka;+Inotoita zvekutakurwa nekuti haigoni kufamba.+ Musaitya nekuti haikuvadzi,Kana kuita chero chinhu chakanaka.”+ 6 Hapana akaita semi, haiwa Jehovha.+ Muri mukuru, uye zita renyu iguru uye rine simba. 7 Ndiani angarega kukutyai, haiwa imi Mambo wemarudzi,+ nekuti ndizvo zvakakodzera;Nekuti pakati pevakachenjera vese vemamwe marudzi uye pakati peumambo hwavo hwese,Hapana kana akaita semi.+ 8 Vese havafungi uye mapenzi.+ Kurayirwa nemuti hakuna kana chiyamuro.*+ 9 Sirivha yakaitwa nhetenhete inounzwa ichibva kuTashishi,+ uye goridhe kubva kuUfazi,Basa remhizha, remaoko emupfuri wesimbi. Zvipfeko zvazvo ndezveshinda yebhuruu neshinda yepepuru. Zvese zvakagadzirwa nevashandi vane unyanzvi. 10 Asi Jehovha ndiMwari zvechokwadi. Ndiye Mwari mupenyu+ uye Mambo asingagumi.+ Nyika ichadengenyeka nekuda kwehasha dzake,+Uye hapana marudzi achatsungirira kutsamwa kwake. 11 * Muti kwavari: “Vanamwari vasina kusika denga nenyikaVachaparara panyika uye pasi pedenga iri.”+ 12 Ndiye akasika nyika nesimba rake,Iye akasimbisa nyika neuchenjeri hwake+Uye akatatamura denga nekunzwisisa kwake.+ 13 Paanoita kuti inzwi rake rinzwike,Mvura iri kudenga inotinhira,+Uye anoita kuti makore asimuke* kubva kumigumo yenyika.+ Anogadzirira mvura inonaya mheni,*Uye anobudisa mhepo mumatura ake.+ 14 Munhu wese ari kuita zvinhu asingafungi uye achiratidza kuti haana ruzivo. Vapfuri vese vesimbi vachanyara nemifananidzo yakavezwa;+Nekuti mifananidzo yavo yesimbi* ndeyenhema,Uye haina mweya* mairi.+ 15 Haisi chinhu,* ibasa rinoshorwa.+ Ichaparara pazuva rekutongwa kwayo. 16 Mugove waJakobho hauna kuita sezvinhu izvi,Nekuti ndiye Muumbi wezvinhu zvese,Uye Israeri ndiye mudonzvo wenhaka yake.+ Jehovha wemauto ndiro zita rake.+ 17 Unganidza zvinhu zvako,Haiwa iwe mukadzi akakombwa. 18 Nekuti zvanzi naJehovha: “Ndiri kuvhiriridzira* vagari vemunyika yacho kunze kwayo panguva ino,+Uye ndichaita kuti vatambudzike.” 19 Ndiri munhamo nekuda kwekukuvara* kwangu!+ Ronda rangu harirapiki. Uye ndakati: “Chokwadi uhwu ndihwo urwere hwangu, uye ndinofanira kuhutsungirira. 20 Tende rangu raparadzwa, uye tambo dzetende rangu dzadamburwa dzese.+ Vanakomana vangu vandisiya, uye havasisipo.+ Hapasisina asara kuti atambanudze tende rangu kana kusungirira machira etende rangu. 21 Nekuti vafudzi vaita zveupenzi,+Uye havana kubvunza Jehovha.+ Ndokusaka vasina kuratidza njere,Uye makwai avo ese apararira.”+ 22 Inzwai! Pane shoko riri kuuya! Kutinhira kukuru kuri kubva kunyika yekuchamhembe,+Kuti maguta eJudha aitwe matongo, nzvimbo inogara hunguhwe.*+ 23 Haiwa Jehovha, ndinonyatsoziva kuti nzira yemunhu haisi yake. Hazvisi kumunhu ari kufamba kuti aruramise nhanho dzake.+ 24 Haiwa Jehovha, ndiruramisei nemutongo,Asi kwete makatsamwa,+ kuti murege kundisiya ndisisiri chinhu.+ 25 Dururirai hasha dzenyu pamarudzi asingakuteererei+Uye pamhuri dzisingadani zita renyu. Nekuti vaparadza Jakobho,+Chokwadi, vamuparadza kusvika vamutsakatisa,+Uye vaita kuti nyika yake ive dongo.+
^ Kana kuti “hadzibatsiri.”
^ Kana kuti “zvakunobatsira.”
^ ChiAramaiki ndicho chakatanga kushandiswa pakanyorwa vhesi 11.
^ Kana kuti “mhute isimuke.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Anogadzira munobuda nemvura inonaya.”
^ Kana kuti “mweya wekufema.”
^ Kana kuti “Haibatsiri.”
^ Kana kuti “kupotsera.”
^ Kana kuti “kwekutyoka.”